Isigabe ngamandla i-Kia Soul | Isolezwe
Isigabe ngamandla i-Kia Soul
Isolezwe / 28 June 2012, 1:46pm /
IMOTO: Kia Soul
UBANI osengaphinda agigiyele ngezimoto zakwaKia njengoba eminyakeni edlule zaziphendulwa ihlaya ngabantu ababengazitsheli ukuthi ziyoke zifike kuleli zinga ezikulo namuhla. Akuwona uKia kuphela ababewubhuqa kodwa noHyundai, namuhla okuyizinkampani ezihamba phambili emhlabeni ikakhulukazi lapha eNingizimu Afrika. Amasonto amabili engawachitha eSeoul eSouth Korea ngoJanuwari 2011 angivula amehlo ngezimoto zakwaKia.
Izimoto zakwaKia eziphethe isitayela kulezi zinsuku iSportage, Optima, Sedonna (okuyibhasi lakhona) kuze kuyoshaya kwi-i30.
Ungaze uvalele ibhodlela leSoju liphele uma ngikulandisa ngezimoto zakwaKia, kungcono okwamanje sigxile kwiSoul eyethulwe kuleli sonto enenjini engu 2.0 litre eyi Crossover. Nakhu sengikhohlwa phela iSoju isiphuzo esishisayo esidumile eSouth Korea ongeke uphume esitolo sokudlela ungasibonanga etafuleni. Kuleli iSoju ngiyifanisa neSmirnoff, kodwa umehluko usekutheni eSouth Korea bayayihlonipha indlela abaphuza ngayo.
Uzokhumbula ukuthi iSoul akuyona imoto entsha njengoba yethulwa kuleli eminyakeni emithathu edlule eCape Town. Kuhle okwenziwe abakwaKia ukuthi bangabe sebeyiguqula kakhulu iSoul entsha kodwa bayakhele phezu kwesisekelo salena endala.
AMANDLA NO GEARBOX
Isikalo sale njini engu 2.0 litre singu 1999cc kanti sikhiqiza amandla afinyelela ku 122 kW netorque engu 200 Nm.
Kukhona edonsa ngamagiya ayisithupha eshintshwayo, bese kuba khona ezishintshayo. Ngaphandle kokwengeza amandla enjini zikhona ezinye izinto ezintsha abazishintshile njengamalambu angaphambili, itailgate, izibuko ezinhlangothini kanye namasondo asethe ukuba ugqinsi. Ngabe akuwona uKia uma bengawafakanga amalambu ayi LED Daytime Running Lights atholakala kwi Sportage ne Optima.
Muva nje izimoto zakwa Kia sezidle ngokugoloza nokuqumba ngaphambili okuthathelwe kakhulu ezimotweni zamaJalimane.
Okunye okwengeziwe ama park assist ahambisana nekhamera ekwazi ukusiza umshayeli abone ngemuva uma ehlehla noma efaka igiya eliya emuva.
Imoto idunyiswa ngebhathini nokhiye ofana nesensa okumele njalo ube semzimbeni uma uzodumisa. ICruise control itholakala kuphela kwi automatic.
Ezinye izinto ezihambisana nezokuphepha ezitholakala kuphela kwi 2.0 litre iVehicle Stability Management (VSM), Electronic Stability Control (ESC) ne Hill-start Assist Control (HAC).
Sesikhulume sageqa amagula nge 2.0 litre empeleni iSoul itholakala ngezinjini ezimbili kukhona nenye engu
1.6 litre nayo esebenzisa upetrol ephuma nezinto ezihlukene njenge air conditioning, Bluetooth, amawindi asebenza ngogesi ngemuva nangaphambili, iradio edlala ama CD elayisha ngaphambili, kanye nezindawo zokuxhuma iMP3/USB ne iPod.
ISoul itholakala ngemibala ehlukene okukhona omhlophe , Bright Sliver, Titanium Silver, Green Tea Latte, Tomato Red, Moonlight Blue nobizwa ngo Black Soul.
Ngaphakathi futhi iyazidlula ezinye izimoto ezingama Crossover ngoba yona inezindawo ezingu 14 ezingamakhosombe ongabeka kuzo izinto.